सिरहा ः प्रतिनिधीसभा सदस्यको लागि सिरहा जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ वाट वाम गठबन्धनका तर्फ वाट संयुक्त उम्मेदवार बनेका लीलानाथ श्रेष्ठको व्यक्तित्व र कृतित्वको चर्चाले सिरहामा गति लिएको छ । क्षेत्र नं. ३ मा उनी उम्मेदवार भए पनि सम्पूर्ण जिल्ला भरमा उनको चर्चा छ । उनलाई जिल्लाकै अभिभावक नेताको रुपमा चित्रण गरेको सुनिन्छ । सिरहामा नेता धेरै छन् तर लीलानाथ श्रेष्ठ जति लोकप्रीयता हासिल गर्न अरुले धेरै समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ ।
हुन त उनी पहाडे समुदायका हुन् तर मधेसी समुदायमा पनि उनलाई अत्यन्त रुचाईन्छ । उनको व्यक्तित्व सवैको लागि ग्राह्य छ । पुस्तौ पुस्ता देखि सिरहाकै धर्तिमा जन्मे हुर्केका उनको परिवार मिथिला र मैथिल संस्कृतिमा रमिएका र रंगिएका छन् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा असंतुलित बिकास हुनु वा बिकासको मूलधारवाट कुनै क्षेत्र विशेष ठगिनु वा पछाडी पर्नुमा मूलत त्यस क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मानिस ( नेता ) कमजोर भएर हो । सिरहा जिल्ला पनि बिकासमा पछाडी परेको जिल्ला हो । किनकी विगतका कुनै नेताले जिल्लाको बिकासका लागि केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सिरहावाट जितेर जाने नेताहरु या त क्षमताविहिन भए वा बिकास र सिरहाली जनता प्रति अकर्मण्य भए । फलत सिरहाली जनता बिकासवाट सधै ठगिए । तर लीलानाथ श्रेष्ठमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता पनि छ र उनी विकासप्रेमी पनि छन् । जिल्ला बिकास समितिको उपसभापति जस्तो सानो पदमा हुँदा पनि उनले जिल्लामा थुप्रै बिकासका कार्यहरुलाई साकार रुप प्रदान गरेका थिए र जिल्लाको बिकासका लागि नक्शा – योजना ) कोर्न सकेका थिए ।
बिकासका लागि नेता स्वप्नद्रष्टा पनि हुनु आवश्यक छ । के काम कुन ठाउँमा र कुन समयमा गर्दा जिल्लाको बिकास हुन्छ , जिल्लालाई समृद्धि तर्फ लान सकिन्छ र सिरहाली जनताले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् त्यसको सही सही रुपमा पूर्व आकलन गर्न सक्नु भनेको स्वप्नद्रष्टा हुनु हो । नेता भनेको नै दुरदृष्टि भएको हुनुपर्छ । स्वप्नद्रष्टा हुनुपर्छ । यो क्षमता लीलानाथ श्रेष्ठमा छ । उनी जिल्लाको अभिभावक नेता भएर बिकासको गतिलाई तिव्रता दिन सक्ने क्षमता राख्दछन् । भोलीका दिनमा योजनावद्ध तरिकाले जिल्लाको बिकासको मार्गचित्र कोर्न सक्छन् ।
लीलानाथ श्रेष्ठको स्वभाव र व्यवहार हेर्दा उनलाई भनिन्छ ‘ आँखामा हाले पनि नविजाउने नेता ’ अर्थात उनी जनताका विचमा आँखाका नानी जस्तै छन् । सवैलाई समान महत्व दिन्छन् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दैनन् । कसैलाई पनि दुत्कार्दैनन् । सर्वसाधारण जो सुकैले पनि सहज तरिकाले उनलाई भेट्न पाउँछन् । सवैको गुनासो र दुखेसो सुन्छन् । हरसम्भव मद्दत गरिदिन्छन् सवैको काम गराई दिन्छन् । उनको ७५ प्रतिशत समय जनसेवा मै वित्छ । त्यसकारण पनि उनी जनता माझ लोकप्रीय छन् ।
सर्वसाधारण जनताका लागि मात्र होईन , आफ्नो पार्टी एमालेका लागि मात्र पनि होईन , लीलानाथ श्रेष्ठ त अरु पार्टीका नेताहरुका लागि पनि प्रीय छन् । सवै पार्टीका प्राय सवै तह र तप्काका नेतासंग उनको घनिष्ट सम्बन्ध छ । अन्य पार्टीका नेताहरु पनि विभिन्न काम लिएर उनी समक्ष पुग्छन् र सेवा र सहयोग लिएर फर्किन्छन् । त्यसकारण उनलाई अन्य पार्टीका नेताहरुले पनि अगाडी बढाउन चाहान्छन् । लीलानाथ श्रेष्ठले जितोस् भनेर कामना गर्छन् ।
लीलानाथ श्रेष्ठ जतिको क्षमतावाण, जनप्रीय , बिकासका लागि स्वप्नद्रष्टा र बिकासको कार्यहरुलाई साकार रुप दिन सक्ने तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अभिभावक नेतालाई यस पटकको चुनावमा अत्यधिक मतले क्षेत्र नंं ३ का जनताले जिताउने छन् ।